ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Zonshine ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Bago Regional Government
Home / တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ / စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန / ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Zonshine ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အစ္စရေးနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Zonshine ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
December 22, 2016	စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန, ပဲခူးခရိုင်, သတင်းမှတ်တမ်းများ 54 Views
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ (ပဲခူး)
(၂၂.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းထံသို့ ရန်ကုန်မြို့၊ အစ္စရေးနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Zonshine ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ဇော်နိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှမင်းထွဋ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ H.E. Mr. Daniel Zonshine က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းသည် မိမိတို့ဘက်မှ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ၊ မျိုးစေ့နှင့် အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထွက်ရှိသည့် သီနှံများကိုလည်း ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီး ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ခြင်းများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဆောင်ရွက်မည့် စံပြစိုက်ကွင်းများတွင် သင်တန်းကျောင်းများ၊ သီးနှံသိုလှောင်ရုံများ ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် ဒေသခံတောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ဒါမှသာ ဒေသခံတောင်သူများလည်း စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ သိရှိနားလည်ပြီး နောင်အနာဂတ်တွင် မြန်မာ့သီးနှံများ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဝန်ကြီးချုပ်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသည့် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတောင်သူများ အနေဖြင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ သီနှံအရည်အသွေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ထိုက်သင့်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ မခံစားကြရကြောင်း၊ ယခုလို အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘို့၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဘို့၊ အနာဂတ်တွင် မြန်မာ့သီးနှံများ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်မည့် အခြေအနေကောင်းများဖြစ် ပေါ်လာနိုင်စေဘို့ အဆွေတော်တို့ လာရောက်တွေ့ဆုံမှုအပေါ် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း၊ မိမိတို့အစိုးရမှလည်း တောင်သူလယ်သမားများဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး ရေရှည်၊ ရေတို စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အဆွေတော်တို့၏ လုပ်ငန်းစီမံချက် အသေးစိတ် အား မိမိတို့အစိုးရသို့ တင်ပြပေးစေလိုကြောင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် မြေနေရာအား သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။